अष्ट्रेलियामा अगष्ट ९ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा किन सहभागी हुनुपर्छ ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा अगष्ट ९ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा किन सहभागी हुनुपर्छ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २१ श्रावण २०७३, शुक्रबार १३:२२ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा यही अगष्ट ९ तारिखमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । हरेक पाँच पाँच वर्षमा हुने जनगणना यसपटक फेरि हुन लागेको हो ।
मुलुकमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको वास्तविक अवस्था थाहा पाउँनका लागि जनगणना गर्ने गर्दछ ।
अष्ट्रेलिया बहुराष्ट्रिय,बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । त्यसैले यहाँको जनगणनामा सबै मुलुकका समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यहरुमा नेपालीहरुको संख्या बढ्दोछ । त्योसँगै विभिन्न समस्या,आवश्यकता र सरोकारका विषयहरु पनि उठ्न थालेका छन् । यी सबै कुराहरुका लागि जनगणनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । किनभने कुन समुदायको कुन क्षेत्रमा कति उपस्थिति छन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनगणनाबाटै थाहा हुन्छ ।
त्यसैले अगष्ट ९ मा हुन लागेको अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रियताका साथ सहभागी हुन नेपाली समुदायहरुले पनि स्वस्फूर्त रुपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा किन सहभागी हुनुपर्छ ?
अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति कति छन् भन्नेबारे सरकारले थाहा पाउँने यही राष्ट्रिय जनगणनाबाट हो । सन् २०११ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालीहरुको कम चासो र अज्ञानतका कारण थोरै मात्र नेपालीहरुले सहभागीता जनाए । त्यसले गर्दा अष्ट्रेलियामा बस् आएका नेपालीहरुको संख्या अत्यन्त थोरै देखियो । यसो हुँदा राज्यको सेवा र सुविधाबाट बञ्चित हुनुका साथै प्राथमिकतामा समेत नपर्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागीता जनाउँनु हरेकका लागि अनिवार्य छ ।
को को सहभागी हुने ?
अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा यहाँ बस्दै आएका सबै नागरिकहरुले सहभागीता जनाउँनुपर्नेछ । यहाँको नागरिकता भएका,नभएका,पीआर पाएका वा नपाएका,विद्यार्थी,पर्यटक वा ४५७ जुनसुकै भिसा लिएकाहरुले पनि राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागीता जनाउँन आवश्यक छ ।
के राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी हुन अनिवार्य छ ?
अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका हरेक नागरिकले जनगणनामा सहभागीता जनाउँन अनिवार्य छ । यदि कसैले जानी जानी वा नियतबस जनगणनालाई अवमूल्यन गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कडा कारबाही हुनसक्छ । यस्तै आफ्नोबारेमा गलत सूचना दिनमाथि पनि कारवहाी हुन्छ ।
विवरण दिदा गोपनीयता भंग हुन्छ कि ?
राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नोबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिए पनि डराउँन पर्दैन । किनभने गोपनीयताको १००% ग्यारेन्टी रहन्छ । यो विवरण अष्ट्रेलियाको तथ्यांक विभागसँग मात्र सुरक्षित रहन्छ । यसमा उल्लेख गरिएका विवरण उसले अरु कसैलाई प्रयोग गर्न दिदैन ।
यो अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका नेपाली समुदायका लागि आफ्नो उपस्थिति,पहिचान र अस्तित्व उजागार गर्न पाउँने स्वर्णिमा अवसर पनि हो । त्यसैले अष्ट्रेलियाको यो राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रियताका साथ सहभागीता जनाउँन आवश्यक छ ।
Previousप्रधानमन्त्री दाहाल बालुवाटारमा,अनावश्यक खातिरदारी नगर्न निर्देशन
Nextरियो ओलम्पिकमा फुपुले उचालिन् नेपालको झण्डा
२ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०६:४०